Nadaafadda Xogta: Tilmaamaha Degdegga ah ee loogu Biirinayo Xogta Nadiifinta | Martech Zone
Iskudarid mideynta waa hawl muhiim u ah howlaha ganacsiga sida suuqgeynta tooska ah ee boostada iyo helitaanka hal ilaha runta ah. Si kastaba ha noqotee, ururo badan ayaa wali rumeysan in nidaamka isku-biiritaanka uu ku kooban yahay kaliya farsamooyinka iyo shaqooyinka Excel ee wax yar ka qabta hagaajinta baahiyaha sii kordhaya ee tayada xogta.
Tilmaamahan wuxuu ka caawin doonaa ganacsiga iyo adeegsadayaasha IT-ga inay fahmaan isku biiritaanka, iyo suurtagalnimada inay ka dhigaan inay ogaadaan sababta kooxahoodu aysan u sii wadi karin ku biirista iyo nadiifinta illaa Excel.
Waa maxay Habka Mideynta ama Waxqabadka?
Merge purge waa habka loo keenayo ilo dhowr ah oo xog ah hal meel iyadoo isla markaa laga saarayo diiwaanada xun iyo kuwa nuqul ka soo baxa isha.
Waxaa si fudud loogu sharxi karaa tusaalaha soo socda:
Ogsoonow in sawirka kore uu leeyahay saddex diiwaan oo isku mid ah oo leh arrimo badan oo la xiriira tayada xogta. Markaad adeegsato hawl isku milmaan diiwaankaan, waxaa loo rogi doonaa wax soo saar nadiif ah oo keli ah sida tusaalaha hoose:
Marka la isku daro oo la nadiifiyo nuqullada laga helay ilo badan oo xog ah, natiijadu waxay muujineysaa nooc isku dhafan oo ah diiwaanka asalka ah. Tiir kale [Warshadaha] ayaa lagu lifaaqay diiwaanka, oo laga soo qaatay nooc kale oo rikoor ah.
Soo saarida geeddi-socodka nadiifinta waxay abuureysaa diiwaanno ay ku jiraan macluumaad gaar ah oo u adeega ujeeddada ganacsi ee xogta. Tusaalaha kor ku xusan, markii lafilayo, xogtu waxay u adeegi doontaa diiwan lagu kalsoonaan karo suuqleyda ololayaasha boostada.
Hab-dhaqannada ugu Fiican ee isku-darka iyo xoqidda Xogta
Iyadoo aan loo eegin warshadaha, ganacsiga, ama cabbirka shirkadda, isku-darka habraacyada nadiifintu waxay u adeegtaa saldhig u ah ujeeddooyinka xog-wadista. In kasta oo jimicsigu ku koobnaaday isku-darka iyo baabi'inta oo keliya, maanta isku-biiridda iyo sifaynta waxay u xuubsiibtay farsamo muhiim ah oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay falanqeeyaan xogtooda si faahfaahsan.
In kasta oo hawshu si otomaatig ah u socoto hadda iyada oo si ballaaran loo marayo ku milmaan software purge iyo aaladaha, adeegsadayaashu wali waxay u baahan yihiin inay ilaaliyaan dhaqamada ugu fiican ee ku saabsan iskudarsiga xogta. Kuwa soo socdaa waa qaar aan aad kuugula talinayo inaad raacdo:
Joogitaanku wuxuu diiradda saarayaa Tayada Xogta: Kahor intaadan fulinin hawlgalka iskudarsiga, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo oo la jaangooyo xogta, maadaama taasi ay hubinayso in hannaanka deduping-ka uu fudud yahay Haddii aad ka goyso adigoon xogta nadiifin, natiijooyinka ayaa kaliya kaa niyad jabi doona.
Ku dhaganaanta Qorshe macquul ah: Tani waa haddii ay dhacdo in habka midaynta xogta fudud uusan ahayn mudnaanta adiga. Waxaa lagugula talinayaa inaad dejiso qorshe kaa caawin doona qiimeynta nooca diiwaanada aad raadineyso inaad ku biirto oo aad nadiifiso.
Hagaajinta Habkaaga Xogta: Guud ahaan, ka dib hawlgalkii ugu horreeyay ee milgeynta, shirkaduhu waxay horumariyaan faham wanaagsan oo ku saabsan moodeelkooda xog. Marka faham horudhac ah lagaa helo qaabkaaga, waad sameyn kartaa KPIs waxaadna yareyn kartaa waqtiga lagu qaato howlaha guud.
Joogtaynta Diiwaanka Liiska: Nadiifinta liistada daruuri maahan tirtirka liiska gebi ahaanba. Macluumaad kasta oo ku milma softiweerka purge wuxuu awood kuu siinayaa inaad keydiso diiwaanka oo aad keydiso keydka xogta ee isbeddel kasta oo lagu sameeyo liiska.
Haysashada Hal Ili oo Runta ah: Marka xogta isticmaalaha laga soo helo dhowr diiwaan, ismaandhaafyo ayaa soo food saara iyadoo ay ugu wacan tahay macluumaad kala fog. Xaaladdan oo kale, ku milmida iyo sifaynta waxay ka caawisaa abuurista hal il oo run ah. Tan waxaa ku jira dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah macaamilka.
Faa'iidooyinka Is-Adeeggu Isku Biro Software-ka Saafi
Xal wax ku ool ah oo loo abuurayo hal ili oo run ah iyada oo la hubinayo inaad raacdo hababka ugu fiican ee hadhay, ayaa la helayaa barnaamij iskudhaf ah. Qalab noocan oo kale ah ayaa dib u qori doona diiwaanka duugga ah iyadoo la adeegsanayo macluumaad cusub iyada oo loo marayo habka badbaadada xogta.
Intaa waxaa sii dheer, is-dhexgalka is-adeegsiga aaladaha wax lagu nadiifiyo waxay awood u siineysaa dadka isticmaala ganacsiyada inay si habboon ugu milmaan oo u nadiifiyaan diiwaankooda xogta iyaga oo aan ka dhigin lagama maarmaan iyaga u leh aqoon qibrad u leh barnaamij ama khibrad.
Qalabka isku-dhafka ah ee isku-dhafan ayaa ka caawin kara dadka isticmaala ganacsiyada:
Diyaarinta xogta iyada oo loo marayo qiimeynta khaladaadka iyo joogtaynta macluumaadka
Nadiifinta iyo hagaajinta xogta si waafaqsan xeerarka ganacsiga ee qeexan
Iswaafajinta liisas badan iyadoo la adeegsanayo isku dhafka algorithms-ka la aasaasay
Ka-qaadista nuqullada leh heer sax ah oo sarreeya
Abuuritaanka diiwaanno dahabi ah iyo helitaanka hal il oo run ah
& ka badan
Baahnayn in la sheego, xilligii otomaatiggu u noqday mid muhiim u ah guusha ganacsiga, shirkaduhu ma awoodi karaan inay dib u dhigaan hagaajinta xogtooda ganacsi. Sidaa darteed, qalabka mideynta / nadiifinta xogta casriga ah ayaa hadda noqday xalka ugu muhiimsan ee dhibaatooyinka da'da hore ee la xiriira geeddi-socodka adag ee isku-darka iyo nadiifinta xogta.
Xogta shirkaddu waa mid ka mid ah hantidooda ugu qiimaha badan - iyo sida hanti kasta oo kale, xogta waxay u baahan tahay kobcin. In kasta oo shirkaduhu ay noqdeen kuwo laser diiradda saaraya helitaanka xaddiga macluumaadka iyo xoojinta ururinta xogtooda, haddana xogta la helay waxay ku egtahay hurdo harsan iyo qaadashada CRM qaali ah ama meel lagu keydiyo muddo dheer. Xaaladaha noocaas ah, xogta waxay u baahan tahay in la nadiifiyo ka hor inta aan loo adeegsan ganacsiga.
Si kastaba ha noqotee, geeddi-socodka adag ee isku-dhafka / nadiifinta ayaa la fududeyn karaa iyada oo loo marayo hal-ku-darsasho isku-duuban oo kaa caawinaysa inaad ku milmaan ilaha xogta iyo inaad abuurto diiwaanno runtii qiimo leh.
Jaranjaro Macluumaad waa shirkad tayo sare leh oo softiweer ah oo u heellan inay ka caawiso dadka isticmaala ganacsiyada inay sida ugu badan uga helaan xogtooda iyada oo loo marayo iswaafajinta xogta, soo bandhigidda, nuqul ka sameynta, iyo qalabka kobcinta. Haddii ay la jaanqaadi lahayd malaayiin diiwaanno ah iyada oo loo marayo algorithms-keenaya isku-buuqsan, ama u beddelashada xogta badeecada qalafsan iyada oo loo marayo teknoolojiyadda macnaha, Qalabka xogta xogta Ladder waxay bixiyaan adeeg heer sare ah oo aan ku habboonayn warshadaha.
Degso Tijaabo Bilaash ah
Tags: nadiifinta cinwaankacinwaanka geocodingxaqiijinta cinwaankaxogta crmDatakala soocida xogtaadeegga nadiifinta xogtakobcinta xogtanadaafadda xogtajaranjarada xogtaisku aadka xogtaxog ururintatayada xogtamaaraynta tayada xogtakulminta xogtashirkadda datamatchnuqulidxogta shirkaddaalgorithms u dhigmamidow purgeisku aadka alaabtaiskudarsiga diiwaankamacluumaad aan haboonaynkala soocida xogta aan qaabaysnaynnadiifinta xogta aan habeysneyn
Javeria Gauhar, oo ah qoraa khibrad u leh B2B / SaaS oo ku takhasustay qorista warshadaha maaraynta xogta. Jaranjarada Xogta, waxay u shaqeysaa sida Suuqgeynta Fulinta, oo mas'uul ka ah hirgelinta xeeladaha suuqgeynta ee soo galaya. Iyadu sidoo kale waa barnaamij-yaqaan leh 2 sano oo waayo-aragnimo ah xagga horumarinta, tijaabinta iyo dayactirka barnaamijyada barnaamijyada ganacsiga.